अटोको दादागिरी अन्त्य कहिले ?
मकवानपुरको हेटौंडामा अहिले सडक कब्जा कसले गरिरहेको छ तपाईलाई थाहा छ ? सडक कब्जा गर्ने आन्दोलनकारीले होलान् भन्ने तपाईको दिमागमा एक प्रकारको चित्र बन्यो होला । अनि सडक कब्जामा लिएर नारा जुलुस गरेको, मान्छेहरुको यात्रा यस्तै यस्तै सम्झनु भयो होला । तर यो सडक कब्जा गर्ने आन्दोलनकारीको विषयमा भन्न खोजिएको होइन । आत्म निर्भरताका नाममा सर्वसाधारण यात्रु लुट्नेको विषयमा कुरा गर्न खोजिएको हो । सडकमा दिन दहाडै त्यसरी यात्रु लुट्ने को होलान ? अब भने तपाईंले सजिलै भन्नुहुनेछ की त्यस्ता लुटेरा त अटो र मयुरीवाला ।
हो पक्कै हो, यतिबेला हेटौंडामा अटो एवम् विद्युतीय रिक्सावालाहरु एक नम्बरका ठग बनेका छन् । उनीहरुलाई कुनै डर छैन यात्रु लुट्नका लागि । हेटौंडाको सडक उनीहरुले खाइसके । अरु सवारीसाधन गुड्न पनि अब उनीहरुमाथि विशेष ध्यान पु¥याउँनुपर्ने अवस्था बनेको छ । उनीहरुलाई हेटौंडामा कारवाही गर्नसक्ने कोही पनि छैनन् । उनीहरुले हेटौंडा बजार वरपर पनि अटो तथा विद्युतिय रिक्सा पिच्छे भाडा असुल्ने गरेका छन् । तीस रुपिया देखि २ सय, ३ सय, ४ सय मनलाग्दी । टाढाको ठाउँसम्म जानुपर्ने अवस्थामा त ठिकै हो भाडा जति लिएपनि के फरक पर्ला र ? कोही त खुसी भएर आफूसंग भएको जति पैसा अटोलाई भाडाबापत दिन्छु पनि भन्लान् तर सर्वसाधारण जो गाउँगाउँबाट हेटौंडा झरेका छन् वा हेटौंडाका पनि अलि वरपरतिरका छन् उनीहरुले अटो–विद्युतीय सवारी यात्रा गर्नका लागि पहिल्यै भाडा सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नत्र त मनलाग्दी भाडा मागेर आफूहरु हैरान हुनु परेको पीडित यात्रुहरुको गुनासो पनि रहँदै आएको छ ।
अहिले हेटौंडा बजारमा आवश्यकता भन्दा अटो तथा विद्युतीय रिक्सा छन् । यिनीहरुलाई चल्न रोक लगाइदिएमा सबैभन्दा राम्रो हुने देखिन्छ । किनभने केही केही बाहेक अधिकांशले अहिले सर्वसाधारणसंग पैसा ठग्ने माध्यम यसलाई बनाइरहेका छन् । यिनलाई तहमा ल्याउनका लागि के के कुराहरु आवश्यक पर्नसक्छन् सो का कारण बारेमा बेलैमा गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ । सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा ध्यान दिनका लागि भनिन्छ, यदि अटेर गरेमा अब यात्रुकै तहबाट कारवाही सुरु हुनेछ ।
तिहार सकियो, कारवाही नरोकियोस्
धन्यवाद एवं अनुरोध
धन्यवाद एवं अनुरोध...
चिनेर भोट हालौं
चिनेर भोट हालौं ...
जनप्रतिनिधी ज्यूको ध्यान कता ?
जनप्रतिनिधी ज्यूको ध्यान कता ?...
हिरालाल साहलाई कारवाही होला त ?
यस्ता कुरामा ध्यान दिऔं चुनावमा ।
यस्ता कुरामा ध्यान दिऔं चुनावमा । ...